Noé - Instant Malagasy
Tonga teny, tonga Aina
Tonga soa e!
Fantaro ireo mpanoratra
Momba ny zava-maniry
ady hevitra sy resadresaka
horonantsary / sary kanto
Ny isa sy ny fanisana
tononkalo kolontsaina malgache malagasy kanto kabary; teny kabary hainteny culture accueil
Ketraka ny fanahy ry Manjamiadana
Vahoaka manana zara
Tsimandrimandry dimampolo taona lasa
Kabary am-pandevenana (ohatra 1)
Ny Sainam-pirenena malagasy
Par Parfait Partout dans Fantaro ireo mpanoratra le 20 Février 2014 à 15:45
Mifankahalala tsara raha ny Instant Malagasy sy i Noé, i Noé sy ny kanto malagasy ihany koa dia torak'izany
Izy no Ranarinjato Noelisoa na i Noé
mpikabary ary mpanoratra ihany koa
teraka ny 16 Desambra 1987 tao Ambohidahy .
Vao 12 taona monja i Noé dia nanomboka nanoratra, izany hoe tamin’ny taona 1999, raha mbola mpianatra teny amin’ny ambaratonga fototra, izay nanoratany ny tononkalo mahakasika ny nahalasanan-drainy.
Nandritra ny fotoana nianarany teny amin’ny lycée dia nanohy hatrany ny asa sorany izy, ary niezaka nametraka izany teo anivon’ny sekoly nisy azy ka nahatonga azy hanangana ny fikambanana « les jeunes poetes».
Nandritra izany fotoana izany no nivahinianany tao amin’ny gazety an-tsoratra iray mpiseho isan’andro ka namoahany ny sangan’asany sy nilazany ny famoahana ny tantara nosoratany voalohany tamin’ny onjam-peo, tantara iray mitondra ny lohanteny hoe : « Voasoritra »,izay mbola nanehoany fa ny zava-drehetra dia efa voasoritra ho tsara avokoa.
Rehefa tsy nahomby tamin’ny fanadinana bakalorea izy dia namerin-taona ka teo indray no nihaonany tamin’ireo masera sy frera tao amin’ny fikambanana ACEP(Aumonerie Catholique des Ecoles Publiques) ary izy no voafidy hitarika io fikambanana io ary teo no nahitany hevitra hanokatra fampianarana kabary ho an’ireo mpikambana tao ka anisan’izany izy, ary hatramin’izao dia izy no filoha sady tonian’ny fampianarana ao amin’io fikambanana mpikabary io.
Raha fehezina dia olon’ny kanto i Noé ,izay no namolavola azy raha mbola kely izy ka hatrizao.
Fanoloran-tena natolotra ny Instant Malagasy ny 20 febroary 2014
« Antsan-tononkaloIlay diariko… »
Instant Malagasy - Créer son blog avec Eklablog - CGU - Signaler un abus -